News | Tag: nepal
यस्तो छ नेपाली क्रिकेट टोलीको अबको यात्रा र चुनौती
बिबिसी । दुई हप्तापछि नेपाल अर्को ठूलो अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटको परीक्षामा होमिंदैछ।
'सरकारी जागिरमा त गयल हुइन्छ, अरूको अण्डरमा बस्नुपर्छ'
लिबाङ, रोल्पा । दशवर्षे सशस्त्र युद्धका बेला देश र जनताको मुक्तिका लागि भन्दै बन्दुक बोकेर हिँडेका सुकिदह–३, जिनाबाङ, रोल्पाका लोकमान वली हिजोआज रोल्पामा उत्कृष्ट बाख्रापालक कृषक बनेका छन् ।
राष्ट्रपतिको चुनाव फागुन २१ मा !
काठमाडाैं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते राष्ट्रपतिको चुनाव गर्न प्रस्ताव गरेको छ । बिहीबार निर्वाचन आयोगमा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त पाँच राजनीतिक दलका नेतासँग छलफल गर्दै आयोगले फागुन २१ गतेको मिति प्रस्ताव गरेको हो ।
युएईले नेपाललाई दियो २७८ रनको लक्ष्य
काठमाडाैँ । आइसिसी विश्व क्रिकेट लिग डिभिजन–२ को उपाधिका जित्न नेपाललाई युएईले २ सय ७८ रनको लक्ष्य दिएको छ। टस जितेर पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले निर्धारित ५० ओभरमा ४ विकेटको क्षतिमा २ सय ७७ रन जोड्यो।
केन्याविरुद्ध नेपालको सनसनी जित
काठमाडौं, फागुन १ । नेपालले केन्यालाई ३ विकेटले हराएको छ । अरिफ सैख र रोहितकुमार पौडेलले छैटौँ विकेटका लागि ८७ रनको साझेदारी गरेपछि नेपालले केन्याबिरुद्ध रोमाञ्चक जित दर्ता गरेको हो ।
नेपालको क्यासिनोमा अवैध पाँच विदेशी कामदार
काठमाडाैं, माघ २८ । नेपालमा विदेशी लगानीमा स्थापना भएको पहिलो पाँचतारे ‘टाइगर प्यालेस रिसोर्ट’ को उच्च व्यवस्थापन हेरिरहेका पाँच विदेशी श्रम स्वीकृतिविनै काम गरिरहेको भेटिएको छ।
यी हु्न् प्रदेश ६ का ठूला आयोजना
काठमाडाैं, माघ २८ । प्रदेश सभाको पहिलो बैठकमा विकास र समृद्धिको चर्चा भए पनि यहाँका ठूला जलविदयुत् आयोजना, राजमार्ग र नयाँ सहरको निर्माणको गति भने सुस्त छ । स्थानीय बासिन्दाको अवरोध र बजेट अभावका कारण आयोजनाले गति लिन सकेको छैन ।
प्रदेश ३ को नाम ‘बागमती’ वा ‘गौरीशंकर' !
काठमाडाैं, माघ २५ । प्रदेश ३ को नाम के राख्ने भन्ने विषयमा बहस सुरु भएको छ । प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका सांसदहरूले प्रदेशको नामका विषयमा फरक–फरक धारणा राखेका छन् । एमाले र कांग्रेसका केही सांसदले बागमती नदी वा गौरीशंकर हिमालको नाममा प्रदेशको नामकरण गर्दा सहमति जुट्ने बताउँदै आएका छन् ।
एक्काइसौँ शताब्दीको विद्यालय, जहाँ हुन्छ दिनमा तीन घन्टा पढाइ
काठमाडाैं, माघ २३ । टिनको टहरा, ह्वांगै कोठा । चिसो ढुंगामा बसेर ससाना नानीहरू कापीमा आफ्नो भविष्य कोर्दै छन् । शिक्षाका नाममा वर्षमा सवा खर्ब खर्च गर्ने देशका बालबालिकाको यो नियति देख्ने जोकोहीलाई पनि आश्चर्य लाग्छ ।
खाेइ ९ हजार ९१८ नागरिक ?
काठमाडाैं, माघ ९ । दैनिक १७ नेपाली बेपत्ता हुने गरेका छन् । प्रहरीको तथ्यांकअनुसार तीन वर्षमा मुलुकभरबाट १८ हजार ९१८ बेपत्ता भएका छन् । बेपत्ता हुनेमा महिला र बालबालिकाको संख्या धेरै छ । हरेक वर्ष बेपत्ता हुनेको संख्या बढिरहेको छ ।
सुरक्षाकर्मीको दैनिक रासनमा विभेद
काठमाडाैं, माघ २ । सरकारले तीनवटा सुरक्षा निकायलाई दिँदै आएको दैनिक रासनमा विभेद देखिएको छ। सेना र सशस्त्रलाई भन्दा प्रहरीलाई कम रासन दिइएको छ।ब्यारेक सिस्टममा बस्ने सेना र सशस्त्रलाई भन्दा दैनिक कामकाजमा बढी खटिनुपर्ने प्रहरीलाई रासन कम दिइएको भन्दै उसमा असन्तुष्टिसमेत बढ्दो छ।